लिभरपुलमाथि सम्मान देखाउन रेफ्रिले मेस्सीलाई आग्रह गर्दै चिच्याएको नयाँ फुटेजमा खुलाशा (भिडियो सहित) – Talking Sports
लिभरपुलमाथि सम्मान देखाउन रेफ्रिले मेस्सीलाई आग्रह गर्दै चिच्याएको नयाँ फुटेजमा खुलाशा (भिडियो सहित)
भर्खरै सार्वजनिक भएको युएफा डकुमेन्टरीको एक फुटेजले २०१९ को च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनल पहिलो लेगका दौरान रेफ्रिले बार्सिलोना स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेस्सीलाई लिभरपुलमाथि केही सम्मान देखाउन आग्रह गरेको खुलाशा गरेको छ ।
फुटबल इतिहासको एक उत्कृष्ट कमब्याक गर्ने क्रममा लिभरपुलले पहिलो लेगमा नोउ क्यम्पमा ब्यहोरेको ३–० को पराजयलाई उल्टाउदै दोश्रो लेगमा एन्फिल्डमा ४–० को जितका साथ फाइनल प्रवेश गरेको थियो । फाइनलमा लिभरपुल टोटेन्ह्यामलाई पराजित गर्दै १४ बर्षपछि च्याम्पियन्स लिग जित्न सफल भएको थियो ।
एन्फिल्डमा बार्साका लागि गोल गर्न नसके पनि मेस्सीले नोउ क्याम्पमा भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । लुईस सुवारेजले पहिलो गोल गरेपछि मेस्सीले रिबाउण्ड र फ्रि किकमा गोल गर्दै बार्साको जित सुनिश्चित गरेका थिए ।
तर मेस्सीको प्रदर्शनले पहिलो लेगका रेफ्रि बियोन कुइपर्स भने त्यति प्रभावित थिएनन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको एक नयाँ फुटेजमा डच रेफ्रि कुइपर्सले नोउ क्याम्पमा मेस्सीले समय खर्च गर्न प्रयोग गरेको रणनीतिका कारण उनलाई चेतावनी दिदै गरेको खुलाशा भएको छ ।
“मेस्सी ! किन ? कम अन !,” मेस्सीले फ्रि कि प्रहार गर्नु अघि समय खर्चदै गर्दा कुइपर्स उनीमाथि चिच्याउदै गरेको फुटेजमा देखिएको छ । “उनीहरुमाथि केही सम्मान देखाउ ! जाउ ! सधै तिमी यही गर्छौ । कम अन, तिमी किन यस्तो गर्छौ ? प्रहार गर !”
मेस्सीले ३–० को अग्रतामा पनि समय खर्चन प्रयोग गरेको रणनीति दोश्रो लेगमा भने काम लागेन । एन्फिल्डमा दोश्रो लेगमा डिभोक ओरिगीले सात मिनेटमै लिभरपुललाई अग्रता दिलाएका थिए जोर्जिनियो वाइनाल्डमले ५४ र ५६ औं मिनेटमा दुई गोल गरेका थिए ।
ओरिगीले १० मिनेट बाकी हुदा चोथो तथा बिजयी गोल गरेपछि लिभरपुलले ऐतिहासिक जित हात पार्दै उपाधि जित्ने आधार खडा गरेका थिए ।
नेपाली राष्ट्रिय टोली भोली स्वदेश फर्कदै
उरुग्वेलाई हराउदै ब्राजिल विश्वकप छनोटको शिर्ष स्थानमा
अमेरिका विरुद्ध नेपाल पहिले ब्याटिङ गर्दै, गुल्शनको डेब्यु
ओपनर स्टेभन टेलरको आक्रमक ब्याटिङ्गपछि नेपालले आईसिसि क्रिकेट बिश्वकप लिग टु त्रिकोणात्मक श्रृंखलामा लगातार दोश्रो पराजय भोगेको छ ।
ओमानमा भएको खेलमा एकपटक फेरि निकै फितलो ब्याटिङ्ग गरेको नेपाल ४८ ओभरमा १ सय ७४ रनको झिनो योगफलमै समेटियो । टेलरले ६३ बलमै ९२ रन ठोकेपछि अमेरिकाले ३० ओभर भित्रै लक्ष्य प्राप्त गर्दै चार विकेटको क्षतिमा १ सय ७५ रन बनायो ।
नेपालले यसअघिको खेलमा पनि १ सय ९४ रन बनाउदा ओमानले ३१ दशमलव १ ओभरमै लक्ष्य पछ्याएको थियो ।
२०२३ बिश्वकपको छनौटको एक चरणको रुपमा रहेको लिग टु मा नेपाल हारका कारण चौथो स्थानमा उक्लन असफल रह्यो । ७ खेल खेलेको नेपालको ६ अंक रहेको छ भने दोश्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाको १४ अंक भएको छ । अमेरिकाले १५ खेल भने खेलिसकेको छ ।
ओमान १२ खेलपछि २० अंकसहित शिर्षस्थानमा कायमै रहेको छ । यो श्रृंखलाको अन्तिम खेलमा नेपालले आइतबार ओमानको सामना गर्नेछ ।
नेपालले दिएको झिनो लक्ष्यको फाइदा उठाउदै टेलरले निकै आक्रमक पारी खेल्दै टिमलाई जित्ने स्थितिमा पुर्याएका थिए । लेग स्पिनर सन्दिप लामिछानेले आफ्नो पहिलो ओभरमै दुई विकेट लिएपनि अर्को एण्डमा टेलरले आक्रमक इनिङ्गसलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
करण केसीको बलमा आउट हुनु अघि १२ चौका र तीन छक्का प्रहार गरेका टेलर आफ्नो पहिलो एकदिवसीय शतक बनाउनबाट भने चुके । करणले त्यही ओभरमा सन्जय कृष्णमुर्तिलाई पनि शुन्यमा पेभिलियन फर्काउदै झिनो आशा दिए पनि जस्करण मल्होत्रा र मोनांक पटेलले अद्र्धशतकीय साझेदारी गर्दै अमेरिकाको जित सुनिश्चित पारेका थिए ।
मानोंकले धैर्यता पुर्वक खेल्दै ७० बलमा ३८ रन बनाए भने जस्करणले तीन छक्कमा र दुई चौकाको मद्दतमा ३२ बलमा ३६ रन बनाए ।
यसअघि करिमा गोरेले शुरुवाती तीन विकेटमै आफ्नो भुमिका खेलेपछि नेपालले सोचे अनुरुपको शुरुवात पाउन सकेन । गाोरेले काइल फिलिपको बलमा आसिफ शेखको टप एजलाई उत्कृष्ट ढँगले समाते भने दोश्रो विकेटका लागि भएको अद्र्धशतकीय साझेदारी पनि तोडे ।
यस क्रममा उनले राम्रो लयमा देखिएका कुशल भुर्तेललाई बोल्ड गरेका थिए । कुशलले ४३ बलमा ३६ रन बनाउदा पाँच चौका र एक छक्का प्रहार गरे । लगत्तै गोरेले फर्ममा रहेका रोहित कुमार पौडेललाई एल्मोर हचिन्सनको बलमा डाइभ हान्दै पोइन्टमा उत्कृष्ट क्याच लिएका थिए ।
ज्ञानेन्द्र र बिनोद भण्डारी (१०) बीचको साझेदारी पनि लामो समय टिक्न नसक्दा प्रशिक्षक डेभ ह्वाटमोरले डेब्युटेन्ट गुल्शन झालाई पाँच नम्बरमा पठाउदै अचम्ममा पारे । तर गुल्शनले ज्ञानेन्द्रसँग ५१ रनको साझेदारी गरे ।
५३ बलको सामना गरेका गुल्शनले दुई चौका र एक छक्काको मद्दतमा २८ रन बनाए । कुशल मल्ल (शुन्य) र सोमपाल कामी (२) दुवैले खराब शट रोज्दै फेरि एकपटक निराश बनाए । ज्ञानेन्द्रले १ सय १ बलमा आफ्नो अद्र्धशतक पुरा गरे भने ४६ औं ओभरमा फिलिपको बलमा पेभिलियन फर्किए ।
अमेरिकाका लागि तिब्र गतिका बलरहरुले ८ विकेट लिँदा कप्तान सौरभ नेत्रभाल्करले ४ र फिलिपले दुई विकेट हात पारे ।
कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले करिअरको तेश्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय अद्र्धशतक प्रहार गरेपनि नेपालले आईसिसि क्रिकेट बिश्वकप लिग टु त्रिकोणात्मक श्रृंखला अन्तर्गत अमेरिकाबिरुद्धको खेलमा फितलो ब्याटिङ्ग गरेको छ ।
अल अमिरतमा टस हारी पहिलो ब्याटिङ्ग गरेको नेपाल लगातार दोश्रो खेलमा ५० ओभर टिक्न सकेन । यसअघिको खेलमा अमेरिकालाई पाँच विकेटले पराजित गरेको नेपालले ४८ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १ सय ७४ रन मात्रै बनाउन सक्यो ।
करिमा गोरेले शुरुवाती तीन विकेटमै आफ्नो भुमिका खेलेपछि नेपालले सोचे अनुरुपको शुरुवात पाउन सकेन । गाोरेले काइल फिलिपको बलमा आसिफ शेखको टप एजेलाई उत्कृष्ट ढँगले समाते भने दोश्रो विकेटका लागि भएको अद्र्धशतकीय साझेदारी पनि तोडे ।
५३ बलको सामना गरेका गुल्शनले दुई चौका र एक छक्काको मद्दतमा २८ रन बनाए । कुशल मल्ल –शुन्य) र सोमपाल कामी (२) दुवैले खराब शट रोज्दै फेरि एकपटक निराश बनाए । ज्ञानेन्द्रले १ सय १ बलमा आफ्नो अद्र्धशतक पुरा गरे भने ४६ औं ओभरमा फिलिपको बलमा पेभिलियन फर्किए ।
अन्तर्राष्ट्रिय4 hours ago
राष्ट्रिय5 hours ago
अन्तर्राष्ट्रिय3 weeks ago